पूर्व प्रम डा. भट्टराईमाथि भारतीय एजेन्ट भएको आरोप
काठमाडौं, कात्तिक १८ । विगत डेढ महिनादेखि जारी नाकाबन्दीका कारण आम दैनिकी कष्टकर बनेको समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा दश बर्षे जनयुद्धका योजनाकार मध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराई भने नयाँ पार्टी निर्माण अभियान तीव्र बनाएका छन् । यद्यपि उनको नयाँ पार्टी निर्माणलाई आम जनताले भने ‘विदेशी षडयन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बाबुराम भट्टराईले सामूहिक राजीनामा दिएका ४५ जनाको हस्ताक्षर राखेपछि उनको तीव्र आलोचना मात्रै भएको छैन, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले उनीमाथि भारतीय दलाल भएको संगिन आरोप समेत लगाइएका छन् ।
बाबुरामलाई सामाजिक सञ्जालमा दर्जनौले गरेको गाली यहाँ उल्लेख गर्न लायकका समेत छैनन् भने असम्भव नै छ । फेसबुक प्रयोगकर्ता याद अर्यालले १७ हजारको बलिदानको कुठाराघात गरेर विदेशीको दलाली गरेकोले हिसाब किताब बाँकी रहेको चेतावनी दिएका छन् भने अधिकांशले मुलुक यो अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको बेला भारतको इसारामा देश र जनतालाई अप्ठेरो पार्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
सहिद परिवारका सदस्य कुमार शर्माले भनेको छन्, ‘मेरो बुवा र १७ हजार नेपाल आमाका सन्तानको रगतको हिसाब किताब गर्न बाँकी छ, भारतीय दलाल होसियार’ भन्दै चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै नभई गाउँका चिया पसलदेखि राजधानीका सम्पन्न तारे होटलसम्ममा डा. भट्टराईले गलत समयमा नयाँ पार्टीको लागि भन्दै एमाओवादी फुटाएको आरोप लगाउँदै विदेशीको एजेन्ट भएको आरोप लगाएका छन् ।
राजधानीको पुतलीसडकस्थित एक चिया पसलमा भेटिएका रुपेन्द्र सापकोटोले भने, ‘भारतसँग राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध लड्नुपर्ने बेलामा नेपालका राजनीतिक पार्टी कमजोर बनाएको तथ्यले डा. भट्टराई भारतीय दलाल भएको पुष्टि हुन्छ, उनले यो छाप आजिवन मेट्न र नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सम्भव छैन ।’